PMDG 737: nhazi akwụkwọ ntuziaka
PMDG 737: nhazi akwụkwọ ntuziaka 7 ọnwa 6 ụbọchị ago #1559
M na-amalite ịmara pmdg 737 NGX mana enweghị m nke ọma n’ịda ala n’iru ntuziaka (enweghị ikuku). N'ihe dị ka 10nm m egbutu A / T, agbada m na V / S = 1000ft / min, jikwaa eriri, ma na-eche maka ọsọ ọsọ. Mgbe ahụ, m kwụsịrị AP ka ụgbọ elu ahụ kwụsie ike ma enweghị m ike ijigide usoro egwu ahụ.
Achọrọ m ịnata ndụmọdụ maka ịga nke ọma akwụkwọ ntuziaka.
PMDG 737: nhazi akwụkwọ ntuziaka 7 ọnwa 6 ụbọchị ago #1560
Otutu omume. Ọ na-ewe oge iji mata aka ịkwọ ụgbọelu, gụnyere ịrị ala. Ọzọkwa, chọọ YouTube maka ndụmọdụ na nkuzi banyere otu esi efe ya.
PMDG 737: nhazi akwụkwọ ntuziaka 6 ọnwa 1 izu gara aga #1585
Ka obi uto gi uto PMDG enwekwara m ya .Ọ na - eme ọtụtụ mmụmụ na nchịkwa akwụkwọ ntuziaka. Could nwere ike ịnwale ikpughe nso na .. Na ezigbo ndị na-anya ụgbọ elu ụwa normaly dissengage na 500 ft. M ga-eme nke a ruo mgbe ị ga-edunye ya oge niile.
Oge ike page: 0.177 sekọnd